Baboneleli ngeenkonzo zokukhathalela abantwana kunye neFektri | Abavelisi boKhathalelo lwaBantwana baseChina
I-Besuper yomoya yabantwana abasandul 'ukuzalwa
Ulusu lomntwana osandul 'ukuzalwa lubuthathaka kakhulu. Kule meko, siyile iBesuper Air Newborn Baby Diaper ukukhusela ngcono usana kunye nokunciphisa umngcipheko wokuqhekeka kwe-diaper kunye nevumba.
Ipaneli ye-Elastic pannel kunye nebhendi yesinqe e-Elastic
· Umoya oshushu oSuper-top oshushu ongalukanga ukugcina umntwana ekhululekile
· Isiseko sokufunxa esikhulu kunye neSUMitomo SAP yokutshixa ulwelo ngokukhawuleza
· Iphepha elingasemva elinokuphefumla kakhulu
Besuper Umama Ukukhetha umntwana ilweyile
Siyazi ukuba yonke into oyibeka kumntwana wakho ibalulekile, kakhulu. Umnqweno wokugcina iintsana zingavezwa yimichiza enetyhefu sisizathu sethu sokuqala sokuvelisa i-100% yamanabukeni akhuselekileyo. I-Besuper ye-Mother Choice Baby Diapers yenzelwe ukubonelela ngononophelo kunye nothando ngomntwana.
· I-ADL yomoya oshushu ongalukanga (Umaleko woSasazo lokuFumana)
· Super absorbency kunye neJamani BASF SAP
· I-Weyerhaeuser Fluff Pulp (i-USA)
· Iphepha elingasemva elinokuphefumla
IVelona Cuddles Umdaka wosana
IVelona Cuddles luphawu lwe-diaper olukhokelayo eSri Lanka kunye neemveliso ezinobuntwana ezingenazo naziphi na iikhemikhali ezinobungozi. IBaron ibingumthengisi onokuthenjwa weVelona Cuddles iminyaka emininzi. Asincedi kuphela ukuthengisa kunye nophuhliso kunye nemveliso, kodwa sikwabonelela ngenkonzo yoyilo lokupakisha ukuncedaIVelona Cuddles iqala kwangoko.
· 100% yeklorini yasimahla kunye ne-hypoallergenic.
· Iiarcs eziphindwe kabini zegolide zithintela imilenze ukuba imile okwe-O.
Isalathiso sobumanzi sitshintsha umbala xa simanzi, ke umama uhlala elazi ixesha lokutshintsha amanabukeni.
· Iphepha elingasemva elinokuphefumla ngokukhawuleza livumela umoya omtsha ukuba ujikeleze ezantsi komntwana kwaye uhlale womile ngalo lonke ixesha.
· Isixhobo esikhulu sokufunxa sinobuchwephesha bokutshixa amanzi obenza umhlaba wome ngokukhawuleza.
· I-aloe yoline yendalo yondla ulusu lomntwana kwaye igcine ithambile kwaye igudile.
· Intambo yokuvala indlebe ephindwe kathathu ibonelela ngenkululeko ephezulu kwiintsana.
Ibhendi yesinqe ye-Elastic ibonelela ngokulingeneyo kunye nokulunga.
Iiteyiphu zobugqi zenza ukuba iidrafti ziphinde zihlaziywe amaxesha ngamaxesha.
Umntwana olilitha, Ilweyile Banokubulawa, Umgangatho ophezulu we-Eco diaper, I-Diaper esanda kuzalwa, Ukusula kwabantwana kulusu olubuthathaka, Ukufakwa kwi-Super diabor yabantu abadala,
Umgangatho ophezulu we-Eco diaper, Ukusula kwabantwana kulusu olubuthathaka, Ukufakwa kwi-Super diabor yabantu abadala, I-Diaper esanda kuzalwa, Umntwana olilitha, Ilweyile Banokubulawa,